Klopp oo sharaxaad ka bixiyay sababta ay Liverpool guuldarro uga soo gaartay Man United kulankii FA Cup-ka – Gool FM
Dajiye January 25, 2021
(Manchester) 25 Jan 2021. Liverpool ayaa gabi ahaanba macsalaameysay tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda ay xilfaltamaan ee Manchester United.
Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku garaacday kooxda Liverpool, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2, Red Devils ayaa sidaas ugu gudubtay wareega xiga ee tartanka FA Cup-ka.
Haddaba tababare Jurgen Klopp ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta ay Liverpool guuldarro uga soo gaartay Manchester United kulankii FA Cup-ka, isaga oo carabka ku adkeeyay in kooxdu ayna ka faa’iidaysan fursadihii ay heleen inta kulanka uu socday.
Tababare Jurgen Klopp oo ka soo muuqday shir jaraa’id ciyaarta kaddib ayaa u sheegay warbaahinta sababta ay Liverpool guuldarro uga soo gaartay ManUnited, wuxuuna yiri:
“Waxaan ciyaarta ku bilaabanay qaab wanaagsan, waxaana qaadnay dadaalka aan ku dooneyno inaan goolal ku dhalino, mana aanan ka faa’iideysan fursadaha qaar ee ugu dambeeyay.”
“Waxay ahayd ciyaar isku dheeli tiran, waxaanan si fiican u dhameysanay qeybtii hore, laakiin marka aad ku ciyaareyso Old Trafford, waa inaad sameysaa dadaalka ugu fiican, hadii kale waxaad ku guuldarreysan doontaa kulanka.”
“U tartamida koobka FA Cup-ka waa uu dhamaaday, hadda waa inaan diirada saarnaa tartamada kale ee soo haray.”
“Ciyaarta maanta waxay tijaabo fiican u tahay Reds, si ay uga gudubto marxaladii adkayd oo ay soo martay, waa inaan sameynaa dadaal fara badan si aan u sii wadno qaabkii aan uga gudbi laheyn dhibaato walba.”